Barcelona oo qorsheyneysa inay sara u qaado qiimaha xiddig ay si aad ah u dooneyso – Gool FM
(Barcelona) 15 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay dalab cusub ka gudbiso inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, daafaca naadiga Manchester City ee Eric Garcia, sida uu daabacay wargeyska “AS” ee dalka Spain.
Waxaa xusid mudan in daafacan reer Spain ee Eric García uu ka qalin jabiyay akadeemiyada kooxda Barcelona ee La Masia, wuxuuna u dhaqaaqay sanadkii 2017 naadiga Manchester City.
19 jirkan reer Spain ee Eric Garcia ayaa noqday laacib muhiim ka ah safka tababare Pep Guardiola ee kooxda Manchester City inta lagu gudajiray qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore 2019/20.
Barcelona ayaa dooneysa inay la soo saxiixato daafac cusub si ay kaga dhigato badelka Samuel Umtiti oo la filayo inuu baxo xagaagan, waxayna u aragtaa inuu yahay Eric Garcia, kaasoo qandaraaskii Man City uu dhacayo hal sano kaddib.
Barca ayaa 10 million euros u soo bandhigtay Manchester City si ay uga dhaadhiciso inuu ka tago Eric Garcia xagaagan, laakiin kooxda reer England ayaa si toos ah u diiday, waxayna codsadeen 22 million euros si loo ansixiyo heshiiska.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in Barcelona ay haatan dooneyso inay sameyso dalab cusub oo ku kacaya 15 million euros, waxayna si buuxda ugu qanacsan tahay inay tahay lacag ku haboon ciyaaryahan qandaraaskiisa uu dhacayo hal sano kaddib, isla markaana lagu heli doono lacag la’aan xagaaga dambe, wali lama oga go’aanka Manchester City ee ku aadan dalabkan.